Sahityabatika: कैले सम्म
आन्दोलित छ आकाश
बर्सिन लागे जस्तो
सबै हतारमा छन् ।
मानो खाएर मुरी उब्जाउने दिन
तर किन किन
छरपष्ट छ मन
हुरी आउँला जस्तो छ
अन्धकार छ चारैतिर
अभाब र गरिबी सङ्गै
प्याज सङ्ग भोक चपाउदै
जीबन बाचिरहेछन ।
र पनि खुशीछन
अनिकाल छ,महङ्गाइ छ
अहङ्कार छ,बिक्रिती छ
कैले मुक्ती आउँला
खोइ गरिबको क्षितिज
खोइ आकाश ?
कहाँ छ आस्थाको धर्ती ?
भत्किदो छ विश्वाश
रङ्गहरुमा घोलिन्छन गरिबी
अनुहार बिक्रित हुन्छ
मन त्यसै त्यसै बिक्षिप्त हुन्छ
बितेका जीबन देखेर
म भने उमेरको उकालो उक्लिरहेछु
सोचेका र भोगेका
स्‍मृतिहर्लाई सम्झेर ।
ब्रसेल्स ,बेल्जियम ।
Aayush Sammohan July 14, 2011 at 1:42 PM
एकदमै मिठो कविता ...
सुरुवात र अन्य एकैनासको मिठासले भरिएको छ ।...